I-Reachli: Inethiwekhi Yokukhangisa Ebonakalayo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 25, 2013 NgoMsombuluko, Februwari 25, 2013 Douglas Karr
Sabelane ngamanye amasistimu wezincomo zokuqukethwe afana Outbrain. Kuthiwani uma okuqukethwe kwakho kungumbhalo ngokwemvelo, noma kunjalo, futhi kubonakala kakhulu - njengamakhuphoni, imidwebo yolwazi, ihluzo lokuthengisa, ukubizelwa esenzweni noma izithombe? I-Reachli yinethiwekhi yokukhangisa ebonakalayo.
UReachli unabakhangisi abangaphezu kuka-70,000 abathola ukubukwa okungaphezu kwezigidi eziyi-3.5 njalo ngenyanga! I-Reachli inobuchwepheshe bokuphathelene nokubhangqa kokufanisa isebenzisa igama elingukhiye, umongo, kanye nama-algorithms wokufanisa isithombe ukubhangqa noma yisiphi isithombe esivele sikhona kuwebhu nesikhangiso esifanele kakhulu nesisebenza ngomfanekiso. Futhi uma ungummemezeli onokulandela okuhle kusayithi lakho nakuma-akhawunti wezokuxhumana, uReachli angakusiza wenze imali ngalo mphakathi.
Ngibonga ithimba eHCCMIS, a umshuwalense wokuhamba inkampani, ngokukhomba isayithi kimi namuhla. Ithimba lokumaketha laphaya lenza umsebenzi omangalisayo wokukhuthaza okuqukethwe okubukwayo nokuthola impendulo enkulu! Bangabakhangisi abasezingeni eliphezulu be-B2C abahlola futhi balinganise konke abakwenzayo.
Tags: inethiwekhi yomkhangisiinethiwekhi yokukhangisaumshicilelifinyelelaukukhangisa okubukwayookuqukethwe okubukwayo
I-RAMP: Ukuthunyelwa kokuqukethwe okulula phakathi kwezindawo ze-WordPress